Notsapainay ny SPC GLOW 9.7 Retina, takelaka mahatalanjona | Androidsis
Google | | About us, hevitra, Takelaka Android
Ny revolisionan'ny takelaka dia toy izany fa raha tsy noho ny serivisy antso an-tariby dia hosoloin'ilay teo aloha ilay farany ao anatin'ny fotoana fohy. Amin'izao fotoana izao, ny takelaka dia lasa hybrida tena izy eo anelanelan'ny solosaina sy ny telefaona. Ity fanovana ity dia namboarina tamin'ny fomba iray izay efa ampidirin'ny takelaka amin'ny asany mahazatra tokoa ny smartphones, toy ny fakan-tsary mora ampiasaina kokoa, serivisy fandefasan-kafatra, ...
Na eo aza izany, ankoatry ny fandrosoana rehetra voalaza etsy ambony, dia mitoetra hatrany ny serivisy maro be azon'ny tsirairay atolotra. Ary miankina indrindra amin'ny habetsaky ny fahombiazan'ny takelaka misy antsika izany. Afaka mahita isika, manomboka amin'ny iPad be pitsiny indrindra, ka hatramin'ny takelaka tsy mila ezaka firy amin'ny fanamboarana, ary lasa fitaovana ampiasaina indrindra noho ny vidiny ambany dia ambany.
Araka ny voalaza fa eo afovoany ny hatsaran-toetra, anio dia hiresaka momba ny takelaka mendrika indrindra isika: la SPC GLOW Retina 9.7. Izy io dia iray amin'ireo zava-baovao amin'ny marika SPC ary vokarina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra izy io. Raha misy kinova vaovao an'ny izany Ny takelaka dia tsy ny fanatsarana azy fa ny fampidirana ny fandrosoana ara-teknolojia, satria izy io dia vondrona iray amin'ireo serivisy mandroso indrindra amin'ny takelaka. Andao hojerentsika ny antony:
Toetra mampiavaka ny SPC GLOW Retina 9.7
Mikasika ny endriny dia mora afangaro amin'ny iPad izy satria lavitra ny sary takelaka mainty mahazatra ananantsika. Ny lokony ivelany dia voahangy fotsy fotsy izay sisin'ny efijery. Na eo aza ny lanjany maivana (564 grama) dia azo jerena ao anatin'ny sokajy takelaka lehibe izy io; Natao mazava tsara hanatanterahana ny asan'ny solosaina pSaingy, na dia manana efijery lehibe aza izy, dia mora azo ary azo entina saika amin'ny kitapo na kitapo rehetra noho ny hateviny 9mm.
Mikasika ny serivisinao tariby ivelany, ny SPC GLOW 9.7 Rétina Samy hafa ny slot ao aminy. Izy rehetra dia eo an-tampon'ny, manomboka amin'ny tsanganana magazine. Ambany tManana slot roa hafa izahay, ny iray ho an'ny tariby USB ary ny iray ho an'ny HDMI. Avy eo isika dia manana ny fidirana an-tariby, ary ny bokotra on / off. Ao amin'ny ankavanan'ny ambony dia hitantsika ny fanaraha-maso ny volavola sy ny elatra karatra microSD. Ary farany, ireo mpandahateny, izay eo amin'ny farany ambany. Aza adino ny fakan-tsary aloha sy aoriana, ary ny mikrô izay mipetraka eo akaikin'ny slot tariby.
Raha ny fikajiana ara-teknika azy dia miaraka amin'ny takelaka misy hatsaran-toetra Android 4.2 fenoina fa navaozina vao tsy ela akory Android 4.4.2 misy vokany ve. Ho an'ny fahalalana bebe kokoa, manana processeur 1.2 izy io Ghz ary mpanamboatra sary Multi Core Power VC. Ny efijery 9.7-inch dia mahazaka, manana vahaolana 2048 × 1536 ary manome zoro 178 degre. Noho ny fanapahan-keviny tsy mampino dia hahita horonantsary sy sary avo lenta isika, ohatra iray amin'izany ity manaraka ity:
Andao hiresaka momba ny bateria. Mampiditra lithium 8.200 XNUMX izy io mAh, izay midika fa mety ho ao amin'ny sokajy takelaka misy fahaiza-manao lehibe kokoa, izany hoe, toa ireo natolotry ny marika voalohany. Miaraka amin'ity karazana bateria ity isika dia miditra amin'ny sokajy fitaovana izay matetika maharitra manodidina ny 4 ora (amin'ny famirapiratana avo sy fifandraisana Internet). Ho fanampin'izay, mahagaga ny faharetany raha toa ka feno tanteraka ny bateria ary avela tsy ampiasaina mandritra ny andro maromaro ilay takelaka. Raha sendra antsika io dia afaka mahita ny bateria isika rehefa nandao azy io farany, tsy nisy surprésés sur batteriereraka tamin'ny fotoana farany talohan'ny nandaozany ny trano.
Zavatra mbola andrasan'ny maro amin'ny takelaka dia fandrosoana lehibe amin'ny fakan-tsary. ny SPC GLOW 9.7 Rétina manana fakantsary an-tsary 2 megapixel ary iray amin'ny 5 megapixel Ao aoriana. Ohatra iray amin'ireo sary nalaina tamin'ity takelaka ity dia hita ao amin'ireto sary manaraka ireto:
Saripika iray hafa nataon'ny SPC GLOW 9.7 Retina
Ny fahaizany mitahiry dia 8 GB, azo ovaina hatramin'ny 32 miaraka amin'ny karatra microSD. Ho an'ireo tsy manam-paharetana amin'ny fitaovana dia mety izany satria 8 segondra monja dia mihodina izy io.
Ao anaty boaty no ahitantsika boky fampianarana maro (amin'ny Anglisy sy Espaniôla) ary bokikely fanazavana sy fampitandremana marobe, ho fanampin'ny tariby roa noresahintsika teo aloha, ny USB iray ary ny iray hafa HDMI; adapter charger, headphone fotsy hifanaraka amin'ny takelaka ary, farany, fonosana flannel ho fanadiovana araka ny tokony ho izy ny fitaovana. Nofonosina harona plastika izany rehetra izany.
Ary mazava ho azy, tsy adinontsika ny miresaka momba ny vidiny, € 199,90. Azonao atao ny mahazo ilay SPC GLOW 9.7 Rétina Ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny orinasa dia ho raisinao ao an-tranonao izany ao anatin'ny roa na telo herinandro. Avy amin'i Googleled dia mamporisika anao mafy izahay hanome izany fotoana izany, tsy isalasalana fa mendrika an'ity takelaka ity ary io no SPC GLOW 9.7 Rétina tsy misy zavatra tokony hialona ny Apple iPad!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Notsapainay ny SPC GLOW 9.7 Retina, takelaka mahatalanjona
Toy izao ny fijerin'ny Android 5.0 amin'ny Samsung Galaxy Note 4